Shan waxyaabood oo laga bartay guul daraddii Manchester United ee Borussia Dortmund – Gool FM
Shan waxyaabood oo laga bartay guul daraddii Manchester United ee Borussia Dortmund
Kaafi July 23, 2016
(London) 23 Luulyo 2016. Diyaar garawgii Manchester United (Pre-Season) waxa uu ku bilowday qaabkii ugu xumaa kaddib markii ay Borussia Dortmund uga adkaatay 4-1.
Goolal ay kala dhaliyeen Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembele and a Gonzalo Castro (2) ayaa guusha u sahlay kooxda Germany halka United oo midka calanka u saxiixay Henrikh Mkhitaryan.
Hadaba waxaan eegi doonaa 5 waxyaabood oo laga bartay guul daraddii kowaad ee Jose Mourinho.
Tababaraha Manchester United Jose Mourinho waxa uu sheegay in uu sameeyey 75% saxiixyada bartilmaameedyadiisa, Pogba ayaa dhiman.
Waxaa cadeyd in Ander Herrera iyo Memphis Depay aysan ahayn kuwo ku filan curinta duulaanka United shalay waxa ay la jaan qaadi waayey xawaarihii Dortmund.
Luke Shaw wuu miraray laakiin waxaa jira sababo ay jamaahiirta United u farxaan
Wey muuqatay in Luke Shaw uusan joogin heerkii uu marayey kahor dhaawicii balse waxa farxad ugu filan taageereyaasha United daawashada horumarada uu sameenayo.
Henrikh Mkhitaryan waxa uu leeyahay dhaqan gool dhalin
Tan iyo markii uu Paul Scholes ka fariistay ciyaaraha Red Devils ma aysan arag goolal ka yimaada dhexda, hada, Henrikh Mkhitaryan oo ay Dortmund xagaagan ka soo iibsadeen waxaa la arkaa in uu arinkaas xalin karo.
Waxaa muuqda dal doloolo daafaca ah
Jose Mourinho waxa uu wal wal ka qabaa daafaca gaar ahaan Valencia oo ay wareeriyeen Dortmund halka uu gool ku laad keenay sidoo kale waxaa qodob madax xanuuna ku noqonaya Phil Jones iyo Rojo oo mid qeyb la dheelay Eric Baily.
Memphis Depay waxaa ka go’an in uu guuleysto
Walow laga ciyaarsiiyey boos aan kiisa ahayn (Weerarka dhexe) hadana waxa uu mar walba daba marayey daafacyada, waxaa lagu badalay Marcus Rashford ugu dambeyn.
Shabeelaha dhexe iyo Hiiraan oo galabta ku dhagan Puntland
Wenger oo balan qaaday inuu qarash garayn doono lacago badan laakiin waa haddii...